एभिन्युज वार्ताको अन्तरकथाः पत्रकारसँग कसरी झुके भाष्कर? – Media Kurakani
June 17th, 2015 Media Reporters Feature Stories
भन्नु परोइन, नेपाली मिडियामा ठूलो श्रम शोषण छ। त्यसो त समाजका सबै क्षेत्रमा यो समस्या छ तर मिडिया त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँका कुरा निकै कम बाहिर आउँछन्। यसको एउटै कारण हो, नेपालका पत्रकार आफ्नैबारे बोल्न सक्दैनन्। तर यसपटक अलि नयाँ भयो, केही नौलो भयो।
यो निर्णय कार्यान्वयन कहाँबाट गर्ने त? महासंघ बैठकमा छलफलपछि निर्णय भयो- हिमालय टेलिभिजन र एभेन्युज टेलिभिजनबाट सुरु गर्ने। यसलाई अभियानकै रुपमा सबै मिडियामा लैजाने र जहाँ जे समस्या छन्, त्यसैको समाधानको पहलकदमी लिने। तत्कालका लागि निर्णय भयो-
हिमालय टेलिभिजन र एभेन्युज टेलिभिजनमा उत्पन्न श्रम समस्या जेठ मसान्तसम्म समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई आह्वान गर्ने, अन्यथा संघर्षका कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष सहभागी भई संघर्षलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने।
त्यसो त यसलाई श्रम शोषण भन्ने कि श्रम समस्या भन्नेबारे पनि बैठकमा ठूलै चर्काचर्की परेको थियो।
निर्णय भएको ७२ घण्टा नबित्दै महासंघले एभिन्युज र हिमालय टिभीमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यो। आन्दोलन गर्नुपर्नाका कारण महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छन्। असार १ गते बुधबार एभिन्युज टेलिभिजन र हिमालय टेलिभिजनमा नेपाल पत्रकार महासंघका सम्बन्धित शाखा प्रतिष्ठानको ब्यानरमा पाँच सूत्रीय माग टाँसेर एकएक घण्टा पत्रकारले धर्ना दिए।
हिमालय टिभीका पत्रकारका माग।
एभिन्युजमा टाँगिएका माग।
महासंघ केन्द्रले संघर्षका कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै शाखा, ४२ प्रतिष्ठान र १० एशोसिएट शाखाका पदाधिकारीहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन अपील गरेको थियो।
हिमालय टिभीमा बुधबार बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म र एभिन्युज टेलिभिजनमा १२ बजेदेखि १ बजेसम्म पत्रकारले धर्ना दिए। धर्नाकै बिचमा पनि अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टलाई वार्ताका लागि एसएमएस आइरहेकै थियो। धर्ना सकिएपछि दुबै टेलिभिजनमा वार्ता भयो।
वार्तामा थिए अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, उपाध्यक्षहरु खिलबहादुर भण्डारी र अनिता विन्दु, महासचिव उजिर मगर, सचिवहरु प्रभात चलाउने, संगीता खड्का र ध्रुव लम्साल, कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतम, केन्द्रीय सदस्यहरु दीपेन्द्र कुवँर, रोसन पुरी, सुरज आचार्य, प्रकाश तिमल्सिना, दीपक पाण्डे र खगेन्द्र पन्त। महासंघको सम्बन्धित शाखाका अध्यक्ष त भैहाले। हिमालयका अध्यक्ष वाइपी घिमिरे र एभिन्युजका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बस्नेत।
हिमालय टिभीमा भएको वार्तामा कुरा मिलेन भने एभिन्युजमा भएको वार्ता सफल।
एभिन्युज टेलिभिजन व्यवस्थापन पत्रकारले पाउन बाँकी तलब तीन दिनभित्र दिन सहमत भयो। पाँचवटै माग पुरा गर्न एभिन्युज टिभीका अध्यक्ष भाष्कराज राजकर्णिकार तयार भए।
एभिन्युज अध्यक्ष राजकर्णिकार सहमतिपत्रमाहस्ताक्षर गर्लै। फोटो खगेन्द्र पन्तको फेसबुकबाट साभार।
तर हिमालय टिभीका अध्यक्ष ललित अग्रवालले भने बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मको अल्टिमेटम पाएका छन्, पत्रकारका मागका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन। उनको जबाफ सुनेपछि महासंघले आफ्नो कदम चाल्ने छ। उसले मास्टर कन्ट्रोल रुममा कार्यरत कर्मचारीलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर काम रोक्न आह्वान गरेको छ। उनीहरुले काम रोकेमा टेलिभिजनको प्रसारण रोकिनेछ।
वार्तामा त्यस्तो के कुरा भयो जसले एकजना माग पुरा गर्न सहमत भए र अर्का अझै के गर्ने भन्ने सोचिरहेका छन्?
वार्ताको खबरभित्रको खबर
एक घण्टा हिमालय टिभीको गेटमा धर्ना दिएपछि पत्रकार महासंघको नेतृत्व हिमालय टेलिभिजनका अध्यक्ष ललित अग्रवालको कार्यकक्षमा छिर्‍यो। करिब ५ देखि ७ मिनेट वार्ता भयो।
ललित अग्रवालले सुरुमै भने- ‘म त पहिला गलैंचा उद्योग चलाएर आएको। गलैंचा उद्योग पनि अहिले चलेको छैन। म संकटमा छु। तीललाई पहाड बनाउनु भएन।‘
वार्ताका लागि पुगेका पत्रकार मुखामुख गरे।
‘यो सानो समस्या हो, खासमा यो समस्या नै होइन’, अग्रवालले ‘लन्ठ्याङ मन्ठ्याङ’ कुरा गरेपछि महासंघका उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीले भने- ‘सानो समस्या रहेछ। किन हल गर्नुभएन त?’
अग्रवालले फेरि गलैंचा उद्योगकै कुरा निकाले।
‘तपाईँको गलैंचा उद्योगको हामीलाई मतलब भएन। पत्रकारलाई तलब दिनुस्। चेकले हुँदैन, अहिल्यै नै यही टेबुलमा नगद गन्नुस्’, खिलबहादुर कड्किए।
त्यसपछि अग्रवाल कालोनीलो भए।
‘पाँच बुँदाभन्दा भन्दा यताउताका कुरा नगर्नुस्।‘
अग्रवाल केही बेर बोल्दै बोलेनन्।
‘अबको वार्ता उधारोमा हुन्न’, महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले भने।
‘हाम्रा पाँच मागबारे प्रष्ट धारणा बनाउनुस् अनि वार्तामा बसौँला’, यति भनेर महासंघको टोली बाहिरियो।
र, एभिन्युज टेलिभिजनतिर लाग्यो, जहाँ १२ बजेदेखि धर्ना थियो।
एक घण्टाको धर्ना सकिएपछि महासंघको टोली वार्ताका लागि भाष्करको कार्यकक्षमा छिर्‍यो।
‘यस्तो टन्टालापुर घाममा बस्नै नपर्ने’ एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले ले नै कुरा सुरु गरे।
‘घाममा बस्ने वातावरण त तपाईँले नै बनाउनुभयो नि’, अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले भने।
‘आजको दिन मेरो लागि कालो दिन हो’- भाष्कर।
‘हाम्रा लागि पनि। तलब माग्न महासंघ केन्द्र नै आउनुपर्ने’, महासंघ टोलीले भन्यो।
‘भोलिदेखि फेरि घाममा बस्न पर्ने कि नपर्ने त्यो भन्नुस्।‘
हिमालयमा अग्रवालसँग कड्किएका महासंघ उपाध्यक्ष खिलबहादुर फेरि कड्किए- ‘पुलिस कसले बोलाएको? तपाईँले माफी माग्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ वार्ता।‘
पत्रकारहरु धर्ना बसिरहँदा ५/७ जना प्रहरी डन्ठासहित धर्नास्थल एभिन्युज टिभी प्रांगणमा आएका थिए।
एभिन्युज टिभीको धर्ना।
त्यसो त ती प्रहरीलाई पनि भण्डारीले नै तह लगाएका थिए। ‘बाहिर जाने भए जानुस् नत्र झडप हुन्छ’, भण्डारीले थर्काएपछि डन्ठा बोकेर आएका पुलिसहरु बाहिर गएका थिए।
‘पुलिस आयो र? मैले बोलाएको होइन’, भाष्करले भने।
‘फोटो देखाइदिम?’, दीपेन्द्र कुवँरले मोबाइल उचाले।
त्यसपछि भाष्करले कुरा मोडे, ‘थाहै नदिइ यस्तो गर्नुभयो।’
‘आन्दोलन थाहा दिएर हुने होइन। यो दास युग होइन’, महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरज आचार्यले भने, ‘तपाईँले जहिल्यै बाचा गर्ने तर पुरा नगर्ने बनाउनुभयो।‘
‘अध्यक्ष ज्यू, तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु। अनि कुरा गर्न सजिलो होला’, दीपेन्द्र कुवँरले प्रस्ताव राखे।
‘तपाईँको टिभीमा समस्या छ कि छैन?’
‘छ भने सक्किगोनी। यहीँबाट कुरा गरौँ।‘
हामी त लचिलो भएर आएका थियौँ। यसरी त कसरी सकिन्छ?’, उपाध्यक्ष अनिता विन्दुको प्रश्न।
कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले चेतावनी दिए- ‘मिडियामा अब पनि पत्रकार शोषण सहेर बस्छन् भन्ने नसोच्नुस्।‘
‘जहिले पनि सहन्छन् भन्नुभएको छ? अब सहन्नौँ’, महासचिव उजिर मगर बोले, ‘सबैसँग लडेर आएको हो। तपाईँसँग पनि लडिन्छ।‘
त्यसपछि भाष्करले समस्या समाधानका लागि दुई तीन महिनाको समय मागे। तर महासंघको वार्ता टोलीले मानेन।
‘मिलाउने भए मिलाउनुस्। नत्र टसल हुन्छ, त्यसका लागि तयार हुनुस्’, दीपेन्द्र कुवँरले भने।
‘सहने कुरा हुन्न। अति भयो’, महासचिव उजिर मगरले भने।
‘ममाथि अट्याक भयो’, भाष्करले भने।
‘आक्रमण त तपाईँले गर्नुभयो। हामीले त प्रतिरोध मात्र गरेको हो’, कुवँरले भने।
‘नियुक्तिपत्र दिनुभएको छैन। ८ वर्षअघिका स्थायी पत्रकारलाई अहिले करार बनाउनुभयो। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ?’, केन्द्रीय सदस्य रोसन पुरीले भने।
हिमालय टिभीमा धर्ना।
सुरुमा भाष्करले ‘म सक्दिन, दुई तीन महिना समय दिनुस्’ भनेका थिए।
‘क्यास चाहियो। उधारोमा वार्ता हुँदैन। बुँदागत छलफल गरौँ। हुन्छ भने हुन्छ, नत्र कुरा नगरौँ’, महासंघको टोलीले अडान लियो।
त्यसपछि बल्ल भाष्कर पत्रकारलाई तलब दिन तयार भए। उनले पत्रकारका पाँचवटै माग पुरा गरे। पहिलो सहमति थियो- तीन दिनमा सबै पत्रकारले पाउन बाँकी तलब सबैको बैंक खातामा पठाउने।
अब त्यहाँका ५९ जना पत्रकारले करिब ४ महिनाको तलब पाउनेछन् भने ११ जनाले ७ महिनाभन्दा बढीको तलब पाउनेछन्। अबदेखि उनीहरुले मासिक तलब पनि समयमै पाउनेछन्। एभिन्युजले एकैपटक करिब ५५ लाख बुझाउने छ।
५ बुँदे सहमति।
‘तलब नदिनेमा पनि उदाहरण बन्नुभयो। अब तलब दिनेमा पनि उदाहरण बन्नुस्’, महासंघ टोलीले भाष्करलाई धन्यवाद दियो र बिदा भयो।
धेरै प्रश्नको त भाष्करले जबाफै दिएनन्।
पत्रकारलाई तलब नदिने मिडिया सञ्चालकको छवि बनाएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका भाष्करराज राजकर्णिकार अब समयमा पत्रकारलाई तलब दिने मिडिया सञ्चालक बन्लान्? यसको उत्तर आउँदो समयले दिनेछ।
तर हिमालय टेलिभिजनमा पत्रकारको आन्दोलन जारी छ। त्यहाँ पनि पत्रकारका पाँचवटै माग पुरा गर्नुको विकल्प छैन किनभने ती कुनै पनि माग पुरा नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैनन्।
Tags Avenues Television Himalaya Television Working Journalist Working Journalist Act
पत्रकारलाई तलब नदिने एभिन्युज र हिमालय टिभीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा »
« एभिन्युजपछि हिमालय टिभीमा पनि पाँच बुँदे सहमति, महासंघको आन्दोलन स्थगित